သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဒီအရာကဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ် - Hello Sayarwon
HPV (သို့မဟုတ် ) Human Papilloma Virusသည်အဖြစ်အများဆုံးလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှတဆင့်ကူးစက်သောဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသောသူများသည်လိင်အဂါၤတဝိုက်တွင် ကြွက်နို့များပေါက်ခြင်းနှင့် သေစေနိုင်လောက်သည်အထိပြင်းထန်သောကင်ဆာများဖြစ်သည့်လိင်တံကင်ဆာ၊သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းကင်ဆာ၊မိန်းမကိုယ်နှုတ်ခမ်းသားကင်ဆာ၊စအိုကင်ဆာ၊လည်ချောင်းကင်ဆာ၊ လျှာကင်ဆာနှင့်အာသီးကင်ဆာများဖြစ်နိုင်သည်။ကင်ဆာများမဖြစ်နိုင်လျှင်တောင်ပေါက်နေသောကြွက်နို့များသည်သင့်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းယုံကြည်ချက်ရှိမှုကိုထိခိုက်စေပါသည်။
ကြွက်နို့များသည်လိင်အဂါၤပတ်လည်တဝိုက် နှင့်စအိုတစ်ဝိုက်တွင်မနာသောအဖုလေးများအဖြစ်ပေါက်တတ်သည် ။အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံများကွဲပြားနိုင်ပါသည်။တစ်ချို့သောကြွက်နို့များသည်ပန်းဂေါ်ဖီကဲ့သို့အဖြူဖတ်များအထပ်လိုက်ပုံစံမျိုးနှင့်ရှိနေတတ်ပါသည်။ ကြွက်နို့များသည်သင့်ကျန်းမာရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒုက္ခမပေးနိုင်သော်လည်းုသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
၁ ။ ြကွက်နို့များ
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့လက်ခံမှုအရလိင်အဂါၤတစ်ဝိုက်တွ င် ကြွက်နို့များပေါက်နေလျှင်သင့်ကိုယ်သင်မသန့်ရှင်းဘူးဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်။တချို့လူများကသင်သည်ကာမကိစ္စလိုက်စားသဖြင့် ကြွက်နို့ပေါက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆထားကြသည် ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုသွားပြောနေ၍မရပေ။ချီးမွမ်း၇ရက်ကဲ့ရဲ့ ၇ရက်မဟုတ်လား။ဤသို့အပြောခံရမည်မှာထုံးစံပင် ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍သင့်တွင်လက်တွဲဖော်ရှိပြီးသားဖြစ်လျှ င်သင့်၏ကိုယ်ကျင့်တရားသည်သူတို့အတွက်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေလိမ့်မည်။သူတို့အားသင်ကလှည့်စားသည်ဟုပင်သံသယဝင်နေနိုင်သည်။သင့်တွင်သာမကသင့်လက်တွဲဖော်တွင်ပါ HIV(ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ)ရှိနေလျှင်သင်သာအပြစ်တင်ခံရမည်မှာမုချဖြစ်သည်။သင်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးလည်းပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်။
တစ်ကိုယ်တည်းသမားဖြစ်နေလျှင်တော့လိင်အဂါၤ မှ ကြွ က်နို့များသည်သင့်အားတစ်ကိုယ်တည်းဘဝမှ ကျွတ်ရန်ပိတ်ပင်နေလိမ့်မည်။သင်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ခန္ဓါအားရွံရှာနေလိမ့်မည်။လူတော်တော်များများကကြွက်နို့ပေါက်သည်ဟုသတိထားမိပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့တောင်မကြည့်ချင်တော့ဟုပြောကြသည်။သင်အပြင်ထွက်တာနှင့်သင့်စိတ်ထဲတွင်စတင်စဉ်းစားသည်က“ငါ့မှာကြွက်နို့ရှိတာသူတို့တွေသိနေလား” “သိသွားရင်သူတို့ရွံကြမှာလား” “လက်ကောလက်ခံနိုင်ပါ့မလား”ဆိုသည့်အတွေးဖြစ်သည်။မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူကုမရသောလိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါရှိသူကိုချစ်သူတော်ရမည်မှာခက်ခဲသောအရာပင်ဖြစ်သည်။ ကြွက်နို့များအားအချိန်အတော်ကြာကုယူရမည်။ကုသတိုင်းပျောက်ချင်မှလည်းပျောက်နိုင်သည်။ထိုအခါမိမိကိုယ်ကိုအထင်အမြင်သေးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ယုံကြည်မှုများတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာပြီးစိတ်ကျရောဂါများစတင်ဝင်ရောက်လာပါတော့သည်။
လိင်စိတ်တက်ကြွမှု နှင့်ကင်ဆာကြားတွင်ဆက်သွယ်မှုတော့သိပ်မရှိပေ။မျိုးပွားအင်္ဂါများတွင်ကင်ဆာဖြစ်နေလျှင်တော့သင့်ကိုယ်သင်သိမ်ငယ်နေမှုသည်သင့်အတွက်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ကင်ဆာမှရသောနာကျင်မှုအပြင်သိမ်ငယ်မှုများလည်းရနိုင်ပါသည်။သင့် ၏လွတ်လပ်မှုများဆုံးရှုံးသွားပြီးသင်လုပ်နေကျအလုပ်များတွင်လည်းမပျော်မွေ့တော့ပေ။သင်စတင်ပင်ပန်းလာပြီးအရင်ကလုပ်နေကျအလုပ်များပင်သင့်အတွက်စတင်ခက်ခဲလာသည်။သင်၏အနာဂါတ်အစီအစဉ်များကိုလည်းရပ်ထားလိုက်ရပြီးသင့်ဘဝကိုသင်စိတ်တိုင်းကျဆေးခြယ်၍မရတော့ဘူးဆိုသည့်အတွေးများစတင်ဝင်ရောက်လာသည်။ဤသို့ဖြင့်သင်ဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်သင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်သင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုသည့် ယုံကြည်ချက်များလျော့ကျလာသည်။ထို့ကြောင့်သိမ်ငယ်စိတ်မဝင်ဖို့နှင့်စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာဖို့ယုံကြည်မှုများသည်သင့်၏ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်လိင်ကိစ္စများတွင်အဓိကျသောအပိုင်းများဖြစ်လာသည်။
လူအများစုသည်ဆေးထိုးခံရမည်ကိုမကြောက်ကြပေ။ဤသို့ဖြင့်သူတို့တွင် HPVကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြပြီးကြွက်နို့များနှင့်ကင်ဆာများအားကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်သည် ။သင်ရောဘယ်လိုလဲ။သင်နှင့်သင်ချစ်ရသောသူကိုပါရောဂါဖြစ်မှုမှကာကွယ်မည်ဆိုလျှင်သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးမည်လား။ကာကွယ်ဆေးမထိုးဘဲကြွက်နို့များမရချင်ဘူးဆိုလျှ င်အကောင်းဆုံးမှာလိင်မဆက်ဆံဘဲနေဖို့ဖြစ်သည်.။သင် ၁၀၀%လိင်မဆက်ဆံဘူးတာသေချာနေလျှင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကိုဆန့်ကျင်နိုင်ပါသည်။ HPVကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် ကြွက်နို့များလိင်အင်္ဂါတွင်ပေါက်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာများကိုဖြစ်စေတတ်သည့် HPVဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအားကာကွယ်ပြီးဖြစ်သည် ။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်တစ်ခါမှမထိတွေ့ဖူးလျှင် (သို့မဟုတ်)လိင်တစ်ခါမှမဆက်ဆံဖူးသေးသည့်အချိန်တွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင်ဆေးအာနိသင်အကောင်းဆုံးကိုရနိုင်သည်။သင်လူပျိုဖော်၊အပျိုဖော်ဝင်သည့်အရွယ်ရောက်သည့်အခါတွင်လည်းဆေးအာနိသင်ရှိနေတုန်းဖြစ်သည်။ကာကွယ်ဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိမည်ဖြစ်သည်။သင်အသက်၄၅နှစ်အောက် ဖြစ်နေသရွေ့ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်နောက်မကျသေးပေ။ကာကွယ်ဆေးသည်သင့်အားရောဂါဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် အပြင် ပြင်းထန်သောဆိုးကျိုးများလည်းမပေးနိုင်သည့်အတွက်ယခုပဲကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပါ။
Hello Health Groupသည်ဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များရောဂါရှာဖွေမှုများ၊ကုသမှုများအားမပြုလုပ်ပါ။
Marra, C., Ogilvie, G.,Gastonguay, L., Colley, L., Taylor, D. andMarra, F. (2009). Patients With Genital Warts HaveaDecreased Quality of Life. Sexually Transmitted Diseases, 36(4), pp.258-260. Mortensen, G. and Larsen, H. (2010). The quality of life of patients with genital warts:aqualitative study. BMC Public Health, 10(1).
Human Papillomavirus (HPV) Vaccines.https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-vaccine-fact-sheet#q8Accessed February 28, 2018.
HPV and genital warts.https://smartsexresource.com/topics/hpv-and-genital-wartsAccessed February 28, 2018.